Iifomula kunye neeFomathi zokuBhala iNgxelo yeNtsebenziswano yeFransi yeFransi
Ukubhala incwadi efanelekileyo yaseFransi yileta kuxhomekeke kwinto enye: ukwazi iifomula ezichanekileyo. Apha aphezu kwetafile enye: uluhlu lweefomula ezahlukahlukeneyo ezifunekayo kwiibhonkco ezifanelekileyo zentengiso yeFransi okanye i- correspondence yorhwebo .
Okokuqala, masibekwe isicatshulwa ngokubhakabhaka ebanzi yiyiphi inxalenye kuzo zonke iinkcukacha zorhwebo, ukusuka phezulu ukuya phezulu.
Izixhobo zeeNcwadi zeShishini laseFransi
Ukubulisa okanye ukubingelela
Umzimba weleta, uhlala ubhalwa kwisixa esiphezulu ngokwakho ( wena )
I-preite close (ngokukhethekileyo)
Ukuvalwa kunye nokusayinwa
Kwiibhiziniselwano zorhwebo zaseFransi, kukulungele ukuba ube nenhlonipho kwaye isesikweni ngokusemandleni. Oku kuthetha ukuba uya kukhetha ulwimi oluvakalayo lobugcisa, oluhloniphekileyo nolusesikweni kwaye olufanelana nesihloko esilandelayo-enoba uqalise ukuthengiselana kweshishini okanye wamkela isabelo somsebenzi. Ezi zimpawu mazifanele zenze inyaniso kuyo yonke incwadi.
Ukuba umbhali ubhala egameni lakhe, ngoko ke incwadi ingabhalwa kumntu wokuqala oyedwa ( je ). Ukuba umbhali ubhala le leta egameni lenkampani, yonke into kufuneka ibonakaliswe kumntu wokuqala ubuninzi ( us ). Ngokuqinisekileyo, izenzi-magama zokutshintshana kufuneka zifanane nesigamazenzi esisetyenzisiweyo. Ingaba ibhinqa okanye umntu ubhala, izichazi kufuneka zivumelane ngesini kunye nenani.
Kwitheyibini elingezantsi, nqakraza kwizihloko ezisebenzayo kwindlela enobumba ofuna ukuyibhala, uze ukhangele iklasi yesampula eyanceda kakhulu phantsi kwetafile ukuze ufumane ingcamango yendlela yokuyidibanisa ngayo ngokufanelekileyo.
Sibheke kwiintlobo ezimbini eziphambili zeenkcukacha zorhwebo kule tafile: iileta zoshishino kunye neencwadi ezinxulumene nomsebenzi. Nganye inemfuno zayo.
Yonke into ofuna ukuyibhala
I-Letter Good Business yeFransi
Iibhokisi ezixhomekeke kuYobhi
Ukuvula ileta Ukuvula incwadi yomsebenzi
Ukwenza isicelo Izizathu zokufaka isicelo
Ukubonisa uvuyo Amava
Ukuzisola Ukwamkelwa / ukwenqaba ukunikezelwa
Ukumangaliswa Ufumaneke + ulwazi loqhagamshelwano
Ukuvala kwangaphambi kokuvala incwadi + Ukuvala itekisi
I SAMPLE LETTER
Khumbula ukuhlala uqinisekisa. Oku kubaluleke kakhulu.
Eyona mthethweni kwaye inesidima, ulunge.
Iifomula ezinxulumene nomsebenzi zingasetyenziswa ngokubambisana neefom yefom yeebenzi ezifanelekileyo ezifana nokubonakalisa ukuzonwabisa okanye ukuzisola.
Xa usuqedile, ukuba kunokwenzeka, cela isithethi somthonyama ukuba uphendule incwadi yakho phambi kokuba uyithumele.
Funda indlela Yokuthetha Iintsuku zeveki kwisiJamani
Units of Time eSpanish
Iindaba eziphezulu ze-Urban Legend Horror Stories
I-Cosmos isiqendu 7 Ukujonga iphepha lokusebenzela
Abalawuli be-Confederate kwi-Battle of Gettysburg
Funda ukudibanisa iVerb verb
Indlela Yokubonisa okanye Ukufihla Amathebhu kwi-Microsoft Access 2010
ICathode Ray History
"Ingane Eqokelela I-Spider-Man" (Amazing Spider-Man # 248)
Indlela yokuthabatha iifoto zeMbali